Microsoft Soro na Linux Foundation dị ka Platinum Member | Site na Linux
Microsoft esonyere Linux Foundation dị ka onye Platinum
Ọtụtụ ejirila ntụkwasị obi siri ike lelee mgbalị Microsoft ugboro ugboro iji nweta Free Software, na-aga site na nkesa nke ya dabere na kernel linux, mpụga nke ngwa iji mee ka ọ kwekọọ na nke ikpeazụ mara: Mgbakwunye nke Microsoft dị ka onye ọrụ Platinum nke Linux Foundation.
Ee ee, dịka anyị siri kwuo, awa ole na ole gara aga, ekwuputara Microsoft dị ka onye Platinum ọhụrụ nke Linux Foundation, yabụ ụlọ ọrụ Bill Gate ị ga-eji ndụdụ ihe dị ka $ 500000 kwa afọ. Ekwuputara ọkwa ahụ maka oge mmemme Mmekọrịta () 2016 ma tinyekwara na ntọhapụ nke SQL SERVER beta maka Linux.
1 Microsoft na Linux Foundation
2 Ọdịdị nke Linux Foundation na nnabata nke Microsoft
3 Kedu ihe nke a gbasara?
Microsoft na Linux Foundation
Ntọala Linux arụwo ọrụ dị oke mkpa na mmepe nke ngwanrọ n'efu ma bụrụ onye isi na-ahụ maka ijigide na imelite kernel Linux, ruo ọtụtụ afọ ọ natala ọtụtụ onyinye ma mee ọtụtụ ọnụọgụ iji kwado mmepe ahụ ngwa ngwa, uzo na-enweghị nkọwapụta atumatu mpụga.
Maka akụkụ ya, Microsoft bụ nnukwu anụ mmiri na sistemụ arụmọrụ ma n'oge ahụ ọ bụ otu n'ime ihe ndị na-emebi nkà na ụzụ n'efu, ruo oge ụfọdụ, ndị isi Microsoft nwere mmasị na Linux. Anyị kwenyere na usoro a sitere na Microsoft ka e nyere na ebumnuche nke inwe ike irite uru na mmepe teknụzụ nke e mepụtara taa maka abamuru nke obodo.
Mmekọrịta dị n'etiti Linux Foundation na Microsoft abụghị ihe ọhụụ, ebe ọ bụ na n'oge gara aga, ntọala ahụ tụrụ anya na Microsoft mezuru njirimara niile iji bụrụ onye otu na nke a, na-ahụ na onyinye ya na mpaghara mkpanaka na igwe ojii ọ ga-abụ ahụkebe.
Ọdịdị nke Linux Foundation na nnabata nke Microsoft
Otu ahọpụtara ndị otu Platinum nke Linux Foundation dị ugbu a dị 11, nke mejupụtara: Cisco, Huawei, Fujitsu Ltd., Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hewlett-Packard Development Co.,Lp, Ụlọ ọrụ Intel Corp., Ụlọ ọrụ IBM CORP., Ụlọ ọrụ NEC CORP., Okechukwu Corp., Uallọ Ọrụ Innovation Qualcomm Inc., Samsung Eletrọniki Co. Ltd na onye ji ụgwọ Microsoft Corp.
Onye Microsoft na-elekọta ya ka ọ bụrụ onye isi oche ga-abụ John gossman, onye na-ese ụkpụrụ ụlọ ndị Azure.
Kedu ihe nke a gbasara?
Ọ bụ ajụjụ siri ike ịza, ihe niile na-egosi na n'elu onyinye ego nke Linux Foundation ga-enweta maka njikọta nke Microsoft, ebumnuche bụ isi bụ na ndị nke abụọ ahụ na-enye aka na teknụzụ ya na oke ọrụ dị mkpa dịka nke ebe a na-agagharị agagharị.
Ugbu a, ọ ga-abụ ihe ezi uche na-adịghị na ya iche na nke ikpeazụ a na-adị njikere ịmetụta ka ụfọdụ ihe gbanwere na usoro azụmaahịa ma ọ bụ teknụzụ ọhụụ a na-eme. Mana anyi aghaghi ikwere na ebumnuche di nma banyere uzo ahia nke mmekorita a, ma anyi nwere olile anya na okwu onye isi ochichi nke Linux Foundation na nkwuputa ndi oru ha bu eziokwu zuru oke:
Microsoft etoola ma tozuo ojiji na ntinye aka na teknụzụ mmalite. Companylọ ọrụ ahụ aghọwo onye na-akwado Linux na-emeghe na onye na-arụsi ọrụ ike nke ọtụtụ ọrụ dị mkpa. Ndị otu gị bụ ihe dị mkpa maka Microsoft, mana yana maka obodo mmeghe, nke ga-erite uru site na onyinye ụlọ ọrụ na-eto eto.
Kedu ihe ị chere? Mmekọrịta dị n'etiti Linux Foundation na Microsoft kwesịrị ya? Ezigbo ebumnuche Microsoft dị mma? A ga-enwe uto na teknụzụ isi mmalite mepere emepe maka njikọta a?
Nwere ike ịchọta ọkwa ntọala Linux Foundation pịa Ebe a
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Microsoft esonyere Linux Foundation dị ka onye Platinum
Ọ dị m ka njikọta a abụghị naanị atụmatụ Microsoft iji mejupụta ego na ụgwọ maka ngwanrọ n'efu na-abụghị nke ya ka ọ na-eme ugboro ugboro yana nyiwe Asure ya, ebumnuche ya abụghị naanị ijide ihe na-abụghị nke gị ma jiri ya nweta ego, yana ọganiihu nke Linux adịla ukwuu nke na ha bidoro idetuo Linux maka ihe kpatara ya na Windows 10 dị ka Linux nke na-eme ka mmadụ chee na Microsoft enweghị ike ịlụ ọgụ megide Linux na oge obula oburu ihe ewu ewu na amara nke oma na odi nma karia Windows ma ya mere mmekorita ahu ka izere iwepu ha n’ahịa ma guo ha ihe n’abughi nke ha, dika okwu a na ekwu, oburu na inaghi ike iti ya,
Zaghachi Lenin Alberto Yepez Jimenez
Cisco, HP, Oracle, Samsung, ha niile anọghị ebe ahụ n'ihi na ọ na-enyere ha aka ijupụta ego karịa?
Dị ka ọ bụ MS ị kwesịrị iti ya.
Otu n'ime ọtụtụ ngosipụta nke ntozubeghị oke nke obodo sọftụwia n'efu.
Cisco, HP, Oracle, Samsung, ha niile anọghị ebe ahụ n'ihi na ọ na-enyere ha aka ijupụta ego karịa? Ma obu otu n'ime ha bu NGO nke n'enye onyinye ha?
N'ime ndepụta aha ahụ, anaghị m ahụ FSF, Debian ma ọ bụ obodo arch, ha bụ ụlọ ọrụ niile na-etinye ego iji were Linux iji nweta ego ọzọ.
Ma, ebe ọ bụ MS ị ghaghị iti ya.
Otu n'ime ọtụtụ ngosipụta nke ntozubeghị oke nke obodo sọftụwia n'efu. Ha kwenyere n'ezie na onyinye dị ezigbo mkpa na-enye site na abụba abụba na iko ya, ma na ndị enyi 3.
M nọnyeere gị ezigbo enyi.
Ekwenyere m nke ọma na nkwupụta gị (ọkachasị nke abụọ).
Crazy na-arahụ site na "na mgbakwunye ọganihu nke Linux adịla ukwuu".
Ihe dị ka ụbụrụ na-achịkwa ụbụrụ ndị ọzọ?….
Zaghachi ka mvrace
Ọ dị ka parasite na-achịkwa ụbụrụ nke ụbụrụ.
Oge ga - agwa, mana ọ na - enye m ajọ mmetụta na - echeta ihe mere na OpenGL ...
Nsogbu bụ na tupu Linux Foundation ha nwere akwụkwọ mpempe akwụkwọ ha nke nabatara ha dị ka onye otu (na platinum iji mechaa), ihe ndị obodo ahụ kwuru ga-abụ obere ihe maka ntọala ebe ọ bụ na maka ha ọ "dị mkpa" n'ihi onyinye Microsoft nyere ha ( na m na-ekwu n'echiche ọ bụla), dị ka onye isi oche nke ntọala ahụ kwuru.
Kedu maka ugbu a, anyị kwesịrị ị atta ntị na otu nsonye Microsoft na-etolite, nke a iji chọpụta ma ọ ga-adị mkpa ịkwaga na sistemụ ndị ọzọ arụ ọrụ, nke m agaghị achọ n'onwe m ebe ọ bụ na Linux masịrị m, mana agbanyeghị, oge ga ga-agwa.
Ndị ụlọ ọrụ ndị a niile bụ ego na-etinye ego maka Linux iji bulie, yana o doro anya, na-enwetakwu ego. Agbanyeghị, nke ka mma, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ nde dollar etinye ego na ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ yana ihe niile nwere ike iji mmadụ niile mee, nnabata.
N'ime ndepụta nke ndị otu adịchaghị m ahụ FSF, Debian, ma ọ bụ obodo Arch.
Otu n'ime ọtụtụ ngosipụta nke ntozubeghị oke nke obodo sọftụwia n'efu. Ọ na-kweere na n'ezie ọkpụrụkpụ free software onyinye na-mere site na a buru ibu na ya na-arụzi ụgbọala, na mgbe ahụ na-na 2 ọzọ ndị enyi.
ọ bụ mbọ na-apụ n'anya Linux adịghị aghọta ………… ..?
Adị m ka ndị ọzọ "na-arụ ụka": Microsoft bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị kachasị bụrụ ndị na-egosipụta ọdịnala (maka m: "mgbochi") na nkà ihe ọmụma Yankee - Achọrọ m na ọ na-eme ka anyị nwee nghọtahie pere mpe banyere akparamaagwa ma ọ bụ enweghị mmasị nke Microsoft (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ Onye na-anọchi anya ọdịbendị a nke eziokwu na uru) enweghị isi ma bụrụkwa nke enweghị ezigbo ntakịrị ntọala.Olee olile anya na m hiere ụzọ mana echere m na ihe ngwanrọ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ ga - eme bụ izere ntakịrị kọntaktị ma ọ bụ nkwekọrịta na Microsoft na ndị ọzọ na - egosipụta The "Yankee" philozophy. Afọ ole na ole gara aga Gates (ma ọ bụ Microsoft) nyere nde kwuru nde dollar na Kenya, Uganda na Tanzania maka mmepe nke ọgwụ megide ọrịa AIDS wdg. Ma na mgbasa ozi ekwughi na o mere. ma ọ bụrụ na ịhapụ Monsanto ka ọ laa n'efu na mba ndị ahụ ma ghara ịkọwa na ọnwa ole na ole tupu (Gates) abụrụla otu n'ime ndị nwe obodo Monsanto kachasị ukwuu ...
Maka ihe ndekọ a bụ ajụjụ: gịnị ka Microsoft nwere ike itinye na mbara igwe Linux na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ na - enweghị nsogbu na izu ohi echiche ...? O doro anya na ha agaghị eme ihe ọ bụla na-amasị ma ọ bụ na-enyere Linux aka, belụsọ na ọ bụ ihe na-ewetara Microsoft uru. - Anaghị m ekwu maka uru "omume", ana m ekwu maka dollar-PC ọ bụla na-enweghị Linux pụtara dollar ole na ole kwa afọ ma ọ dịkwaghị. Ka anyị ghara ịnọ n'okpuru echiche ọ bụla: ọ bụ dollar dị mkpa na Microsoft na-ebi maka NA maka dollar.
Ọ bụrụ na MS nwere ezigbo ebumnuche ịbịaru nso na Linux, ọ kwesịrị ịmalite site na ịhapụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ma kwụsị itinye nrụgide na ndị nrụpụta ngwaike iji mee ka nyiwe ha nabata teknụzụ n'efu. Ọ gaghị abụ na nke a ma ọ bụ akụrụngwa anaghị arụ ọrụ nke ọma na SL. Ọ bụrụ na ha emee, anyị ga-amalite ikwere na ha.
Ikekwe ị kwesịrị ịmalite ịmalite na Microsoft niile na-eji ndị omekome arụgide ọtụtụ mba iji bulie Linux bụ naanị akụkọ. O siri ike ịkwụsị ime ihe ị na-eme naanị na isi nke cospiranoics na FUD creators.
N'aka nke ọzọ Microsoft enweghị ndị ọkwọ ụgbọ ala ịhapụ ha. Nke ahụ bụ ihe onye ọ bụla na-emepụta na-eme. Ma ọ bụrụ na Microsoft nwere ụzọ iji mụọ ndị ọkwọ ụgbọala nke ya, "ndị obodo" kwesịkwara ime otu ihe ahụ karịa ime ka à ga-asị na onye ọzọ ga-enye ha.
Gịnị bụ nzube ọjọọ nke ama Redmont Giant ,,,
Kedu ihe na otu ị chọrọ isi bibie Linux ...
Obodo ga-ekwe ya ...
Obodo? Nke ahụ na-erughị 3% nke ahịa onye ọrụ njedebe na-eji Linux?
Ha na-echefu na ahịa Linux (yana UNIX niile) abụghị onye ọrụ njedebe.
Ọ dịla anya Linux kwụsịrị ịbụ nke "obodo" ma ọ bụ nke otu njikwa mba ole na ole.
Ikwuru eziokwu, Linus n'onwe ya anaghị akwado gpl.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, enweghị ike ịhapụ MS n'ihe banyere ihe ọhụụ na teknụzụ, ụzọ ka mma iji nweta ihe ọmụma na ịhapụ gị ka ọ na-eme, ọ bụrụ na ọ naghị esonye na mmekorita teknụzụ kachasị ukwuu na akụkọ ihe mere eme nke mmadụ. Ọ dị mfe.
Ha enweghị ike isi na mpụga wee nwaa n'ime.
eziokwu bụ na mmebi ha nwere ike ime site n'ime dị ukwuu.
nke a na-enye m mmetụta ọjọọ,
Kedu ihe hell mocosoft na-enye anyị? ọ dịghị ihe ọ bụla, n'ihi na eziokwu ahụ bụ na anaghị m aghọta ya.
Ọ ga - abụ ihe gbasara ọrụ GNU / HURD ugbu a!
Onye mmeri dijo
Ufff, onye ohi n'ime ụlọ, ụlọ ọrụ na-emebi iwu kpamkpam, opekata mpe na EU iji zuo ego ha n'aka ndị na-azụ ahịa. Kedu, olee, ha na-akatọ ya?
Ọ bụ ntuziaka 2005/29 / CE etinyere na iwu nke ọtụtụ mba EU dị ka Spain, Italy ma ọ bụ France na ndị ọzọ. Ọ na-akọwa dị ka omume azụmahịa siri ike na nke mkparị ịmanye ngwaahịa nke onye na-azụ ahịa achọghị mgbe ọ na-azụta ọzọ. Ikpe na France (Petrus - ikpe Lenovo, RG ndebanye aha 91-11-000118) na Italy (Corte di Cassazione, n. 19161 nke 11/09/2014) gosipụtara na ngwanrọ na ngwaike bụ ngwaahịa dị iche iche dị ka nke ha si dị ọdịdị, iwu na oge nnabata nke nkwekọrịta ahụ. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na maka euro 42 ha na-akwụ ụgwọ maka ikike OEM, ịnweghị ike ịga ikpe mara na ị ga-abata na Brussels ịbanye n'ime otu ndị ọka ikpe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Spain (enwelarị ikpe dị iche iche site na Brussels megide ndị ọzọ si Courtlọikpe Kasị Elu na Constitutionlọikpe Iwu n’ihi na ha n’abụ oke). Site n'ụzọ, ASUS na-eweghachi ego ahụ, mana ọ nweghị ụzọ isi mara ma ha weghachite ihe niile na agbanyeghị ihe iwu na-akwadoghị bụ na ha na-ana ya ego, achọghị m ịzụta ya! Ekwuru m, ndị ohi niile.
Microsoft bụ ụlọ ọrụ, dị ka Oracle, Red Hat, SUSE, Sun, n'etiti ọtụtụ m nwere ike ịkpọ aha ahụ na ngwanrọ n'efu. Kedu ihe dị iche na ndị a na Microsoft ndị kpọrọ asị MS nke ukwuu ma hụ Red okpu dịka ọmụmaatụ? Gịnị MS chọrọ ịkpata ego? Ọ bụghị ya bụ ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ ọ bụla? Lee anya na ndị ọrụ SUSE ma ọ bụ Sun mgbe ọ dị ndụ ga-akwụ ụgwọ ọkụ eletrik, ịntanetị, njem, nri, wdg.
Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ha na-eme ya maka ọmarịcha nka, kama ọ bụ maka uru. Ọ bụ ọrụ gị, na ọrụ ndị ọrụ gị.
Ma ọ bụ onye ọ bụla kwenyere na MySQL bụ n'efu n'ihi Sun / Oracle na-emesapụ aka? Ọ dịghị mgbe ọ banyere gị isi na ọgwụgwụ ọrụ mpako nke iji free software bụ dị ọnụ ala tester na ụwa (ọ bụ free)?
Ọzọkwa, ọ na-ewute onye ọ bụla na-afụ ụfụ, ndị na-ebugharị usoro nke sọftụwia na-akwụghị ụgwọ, ma na-enyekwu ọhụụ, bụ ụlọ ọrụ, ọ bụghị obodo.
Debian na-ekwusi nkesa, dị ka Arch, ha anaghị emepụta sọftụwia, kama ọ na-achịkọta ọrụ ndị ọzọ n'ime nkà ihe ọmụma ha. Ọ dịghị otu obodo ndị ahụ mepụtara ma ọ bụ mepụta Apache, MySQL, Linux kernel, Nginx, ma ọ bụ XEN.
Maka m, ike nke mmepe obodo na azụmaahịa gosipụtara Hurd, enwere m ike ịnwụ na ụmụ ụmụ m na-arụ ọrụ na IT, enwere m obi abụọ na ha nwere ike ịhụ Hurd 1.0 zuru oke.
Mana ndị ahụ niile wepụtara ụfọdụ ngwaahịa bara uru na n'efu maka onye ọrụ njedebe iji. Microsoft weputara ugwo. Nke ahụ abanyeghị n’isi gị.
ndi luru agha dijo
Ekwensu na igwe mmadu?
elinks: Ihe kacha mma nchọgharị na weebụ maka Linux ọnụ
KDE Frameworks 5.28.0 dị na nkwalite na KWayland